Wararkii ugu dambeeyay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin oo dhacay – Xigaal.com
HomeWARARKAWararkii ugu dambeeyay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin oo dhacay
Wararkii ugu dambeeyay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin oo dhacay
Weerar khasaaro geystay oo ku bilowday gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Baay, waxaana weerarka laga helayaa warar dheeraad ah.
Bartilmaameydka weerarka ayaa lagu sheegay inuu ahaa saldhiga ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Buurhakaba ee gobolka Baay, balse saraakiisha ciidamada ayaa Caasimadda u sheegay in weerarka la fashiliyay.
Gaari NOAH ah oo laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayuu weerarka ku bilowday sida dadka deegaanka ay sheegeen, waxaana kadib xigay weerar rag ka tirsan Al Shabaab ku qaadeen saldhiga.
Ka hor inta gaariga uusan qarxin ciidamo katirsan dowladda oo ku sugnaa degmada ayaa la sheegay inay wadaha gaariga ku amreen inuu joogsado, basle awood ayuu kaga dhaqaaqay, waxaana markii rasaas lagu furay kadib la sheegay inuu is qarxiyay.
Kadib rasaas labada dhinac ay is weydaarsadeen ciidamada dowladda iyo Al Shabaab waxaa la sheegay inay khasaaro gaartay labada dhinac, waxaana sidoo kale waxyeelo ay soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa degmada.
Dhinacyada ku dagaalamay degmada Buurhakaba wali kama aysan hadlin dagaalka, balse xaalka ayaa saaka degen.
Howlgal Al-Shabab looga furtay hub iyo gaadiid oo ka dhacay Sh/Hoose
SACIID DENI hal arrin ma kaga duwanaan doonaa C/Weli Gaas iyo Faroole?